Ukuhanjiswa kwe-Mate 20 kuthotho lokudlula kwiiyunithi ezili-10 lezigidi | I-Androidsis
I-Huawei ibhengeze ukuba i-Mate 20 yeefowuni ze-smartphones sele ithunyelwe ngaphezulu kweeyunithi ezili-10 lezigidi kwiinyanga nje ezine ezinesiqingatha. Ikwabhengeze ukuba olu sapho lweefowuni lwaphule irekhodi lokuthengisa kwi-Mate yangaphambilini kunye ne-P yexesha elifanayo kwi-Greater China.
Ngelixa amanani ngokucacileyo abonisa ukuthandwa kothotho lweMate 20 kulo mmandla, inkampani ikwatsho ukuba izixhobo ezikolu ngcelele lwee-smartphones ziyaqhubeka nokuthengisa kakuhle eNtshona Yurophu, kuMbindi Mpuma, eAsia Pacific nakwiminye imimandla.
Ukwenza intetho malunga nesi siganeko sibalulekileyo, u-Yu Chengdong, u-CEO wenkampani yabathengi ye-Huawei, wathi ku-Weibo: “Kwiinyanga ezine ezinesiqingatha, uthotho lwe-Huawei's Mate 20 luye lwaphula i-10 yezigidi zeeyunithi! Enkosi ngenkxaso, indumiso kunye nokwamkelwa kwabasebenzisi behlabathi, kunye nokufaneleka okunikwa ngumntu wonke. Kucetyiswa ukuba kuzakubakho inkqubela phambili ngo-2019 kwaye ndijonge phambili ekwabelaneni nani ngovuyo lwenkqubela phambili kwezobuchwepheshe! ”
NgoDisemba wonyaka ophelileyo, isigebenga saseTshayina sasibhengeze ukuba ukuthunyelwa kwe-smartphone kwihlabathi lonke kugqithile Iiyunithi ezizizigidi ezingama-200, emele ukonyuka okuphindwe ka-66 kwiminyaka esibhozo. Ngelo xesha, inkampani yayixele ukuthunyelwa kwe-Mate 20 uthotho kwiiyunithi ezigidi ezi-5. NgoJanuwari kulo nyaka, inani lonyukile laya kwiiyunithi ezigidi ezingama-7,5.
Kwi-2018, ukuthunyelwa kwe-smartphone yenkampani kudlula iiyunithi ezingama-206 ezigidi kwaye kwaxelwa ukuba Ingeniso yeshishini likaHuawei ifikelele kwi- $ 52 yezigidigidi, Yeyona mali inkulu evela kwishishini le-BG yeHuawei.
Kwangoko, umongameli we-Huawei kwishishini labathengi u-He Gang wayethethile Inkampani inokuba ijonge ukuthumela ngenqanawa phakathi kwe-230 kunye ne-250 yezigidi zeeyunithi kulo nyaka. Nangona kunjalo, wagxininisa ukuba konke kuxhomekeke kwiimeko zentengiso kunye nokuqinisekisa inkqubela phambili rhoqo ngamajelo kunye namaqabane abathengisi. Amanani abonisa ukuba inkampani ijolise ekukhuliseni ishishini leefowuni eziphathwayo nge-30-50% ngonyaka.
IHuawe ilungiselela ukumilisela umgca wayo omtsha, i-Huawei P30 uthotho, ebandakanya P30, P30 Pro y P30 Lite, Ngo-Matshi 26 kumsitho wokuphehlelelwa eParis, eFrance. I-Huawei P30 Lite kulindeleke ukuba iphehlelele e-China njenge I-Huawei Nova 4th kulo Matshi 14 uzayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukuhanjiswa kwe-Mate 20 kuthotho kudlula kwiiyunithi ezili-10 lezigidi
Insiza kaGoogle idlula ukhuphelo lwezigidi ezi-5.000 kuGoogle Play